I-villa enhle e-Bayside e-Bethany Lakes - I-Airbnb
I-villa enhle e-Bayside e-Bethany Lakes
Ocean View, Delaware, i-United States
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Colleen
U-Colleen Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Sep 4.
Woza ujabule elangeni ekhaya lethu elihle leholide emphakathini ohamba phambili we-resort yase-Bayside e-Bethany Lakes.
Ikamelo eliyinhloko linombhede omkhulu, i-walk-in closet, i-TV, indlu yokugezela ephelele enobhavu wokuzicwilisa, i-jacuzzi ne-shower ehlukile.
Imali yenhlangano yokuzijabulisa:
May 15-September 30 - $ 300/isonto, $ 150/4 izinsuku noma ngaphansi
Inkathi Yokuphumula - $ 150/isonto, izinsuku ezingu- $ 75/4 noma ngaphansi
Amalineni afakiwe ekuqasheni okuthatha iviki lonke. Ukuqashwa kwamashidi kuyatholakala ukuze kuqashwe isikhashana.
Amabhayisikili, amathoyizi esihlabathi, isihlalo esiphezulu nemidlalo emi-2 yamaphakethe n' ahlinzekelwe ukuze ujabulele futhi kube lula kuwe!
ubusuku obungu-7 e- Ocean View
Iphupho lalaba bavakashi linikeza i-clubhouse ebiza izigidi zamadola lapho ongabhukuda khona echibini elingaphakathi noma elingaphandle, ucwiliswe kubhavu oshisayo, uzivocavoce esikhungweni sokuqina sokuqina, ukudlala amabhiliyade kanye ne-ping-pong emdlalweni. ekamelweni, buka i-tv yesikrini esikhulu, noma vele ujabulele ukushona kwelanga okuhle okuvela ku-Sunset Gazebo. Inkalankala noma inhlanzi esikhumulweni semikhumbi, dlala i-pickleball nethenisi, ibhayisikili, i-kayak, yisa izingane enkundleni yokudlala - i-Bayside e-Bethany Lakes inakho konke!
Indawo iyikho konke! I-clubhouse iwuhambo olula lwemizuzu emi-3 ukusuka emnyango wangaphambili. Endaweni eseduze uzothola amakilasi egalofu, izindawo zokudlela ezihamba phambili, isitolo segrosa, igalaji likaphethiloli, imakethe yezilwane zasolwandle kanye nesitolo seziphuzo. Eduze, jabulela inkundla yegalofu yobuqhawe e-Bear Trap Dunes.
Izitolo ze-Rehoboth ezinhle ziwuhambo olufushane oluya enyakatho ku-Highway 1. Amamayela ayisikhombisa ukuya eningizimu, uzothola i-Ocean City, eMaryland. Woza ujabulele Izindawo Zokungcebeleka Ezithulile eBethany Beach - ngeke udumale!
Simane sikushayele ucingo uma unemibuzo, futhi inkampani yethu yokuphatha izakhiwo iseduze nganoma yiziphi izimo eziphuthumayo!
UColleen Ungumbungazi ovelele